पार्टनरको यी आठ बानीले हुनसक्छ वैवाहिक जीवन बर्बाद, यसरी फिर्ता ल्याउनुस् रोमान्स | Ratopati
पार्टनरको यी आठ बानीले हुनसक्छ वैवाहिक जीवन बर्बाद, यसरी फिर्ता ल्याउनुस् रोमान्स
चुरोट र रक्सी खाने बानीलाई मात्र लत भनिँदैछ । सोसल मिडियामा वा फोनमा घण्टौंसम्म साथीसँग कुरा गर्ने, गेम खेल्नेजस्ता लतले पनि तपाईंको सम्बन्ध तोड्ने काम गरेको हुन्छ । तपाईंको यी सबै बानीका कारण तपाईंले श्रीमतीलाई वास्ता गर्न छोड्नुहुन्छ । वास्ता नगरेपछि तपाईंहरुबीच दुरी बढ्छ । एकपटक सोच्नुहोस् त, यदि तपाईंकी श्रीमती दिनभरी आफ्नो व्यस्त हुने र राती टिभी वा ल्यापटपमा व्यस्त भएर बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल खोज्न थाल्छिन् भने तपाईंलाई कस्तो लाग्ला ? त्यसकारण उनको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुहोस् र सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने कुनै पनि बानी वा लत छुटाउनुहोस् ।
सम्बन्धको डोरी निकै कमजोर हुन्छ । जसलाई तोड्न निकै सजिलो र जोड्न त्यति नै मुश्किल छ । जब दुई व्यक्ति सँगै बस्न थाल्छन् भने उनीहरुलाई एक–अर्काको गुण र अवगुण दुबै थाहाहुन्छ । तर तपाईं कमीलाई चाँडै स्विकार गर्न सक्नुहुन्न । यस्तोमा हरेक कुरामा तपाईं आफ्नो पार्टनरको कमी केलाउन थाल्नु सही होइन । कमी देखाउँदै श्रीमतीलाई तथानाम भन्न तपाईं पछि हट्नुहुन्न तर के श्रीमतीको राम्रो कुरामा उनको तारिफ गर्नुहुन्छ ? यदि होइन भने यो कुराले तपाईंको जीवनमा तनाव पैदा गर्नसक्छ ।